सँगै साउदी उडेका बाबुछोरी ८ वर्षपछि नेपालमै भेटिए : ८ बर्ष देखी बिदेशमा सम्पर्क बिहिन भएपछी परिवारले आस मारेको छोरी शान्ता यसरी नेपाल फर्किन ! एअरपोर्टमै रुवाबासी (भिडियो) – PostKathmandu
सँगै साउदी उडेका बाबुछोरी ८ वर्षपछि नेपालमै भेटिए : ८ बर्ष देखी बिदेशमा सम्पर्क बिहिन भएपछी परिवारले आस मारेको छोरी शान्ता यसरी नेपाल फर्किन ! एअरपोर्टमै रुवाबासी (भिडियो)
काठमाडौं – कहिले छोरी बेचेको, अनि कहिले हत्या गरेको आरोप सुन्दा गोरखा, पालुङटार–५ का हस्तबहादुर परियार हैरान भइसकेका थिए । कुनै अपराधबिना गाउँ, समाजले अनेक आरोप लगाउँदा उनले प्रतिवाद गर्न सकेका थिएनन् । किनकि जसको विषयमा लिएर आरोप÷प्रत्यारोप भइरहेको थियो । त्यही प्रमाण नै उनीसँग थिएन । प्रमाण नभएपछि जसले जे भन्छन् । त्यसैलाई पचाउनु उनको दैनिकी भइसकेको थियो ।
उनलाई समाजको आरोप त लागेकै थियो अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा गएर जीवन सुधार गर्ने लक्ष्य बनाएकी छोरी ८ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन हुदा हस्तबहादुका परिवारमा कम्ती पीडामा थिएन । एकारित समाजको आरोप र अर्कोतर्फ फरफराउँदो उमेरकी छोरी हराउँदा हस्तबहादुर परियारका लागि दिन पनि रात सरह भइरहेका थिए । बिहीबार भने हस्तबहादुरको परिवारमा जीवनमै ठूलो खुशी फर्केको छ । गाउँमा रोजगारीको अवसर नहुँदा १५ वर्षमै साउदी जान बाध्य शान्ता पछिल्लो ८ वर्षदेखि सम्पर्कमा नहुँँदा घरपरिवारले उनको माया मारिसकेको थियो ।
८ वर्षसम्म छोरी सम्पर्कमा नभएपछि ऊ फर्कने आशा मारिसकेका थियौं,’ बिहीबार साउदीबाट फर्केकी छोरीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरेपछि खुशीका आँशु रोक्न सकेनन । उनले केवल यस्तो कसरी सम्भव भयो भन्दै प्रश्न गरिरहे । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या निरन्तर बढिरहेको पाइन्छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपयले राम्रो आर्थिक उपार्जन गरी जीविकोपार्जनलाई सहज बनाएका पनि छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाा सबैको अवस्था स्वदेशबाट सोचेजस्तो भने हुँदैन । ती मध्येकी एक हुन्–गोरखा, पालुङटार–५ की २३ वर्षीया शान्ता परियार । कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै रोजगारीका लागि साउदी अरेयिबा पुगेकी शान्ता ६ वर्षपछि सम्पर्क आएकी छिन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो सहित :- यो पनि पद्नुहोस
Prev३० औँ एनिभर्सरीको अवसरमा श्रीमतीलाई मायालु भाषामा यसो भने चर्चित हाँस्यकलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीले
Nextनायिका सुष्मा कार्की लगाउदिनन् भित्री वस्त्र,आखिर किन ? यस्तो छ कारण